Login Beauler Dyoko
Beauler Dyoko, known in Zimbabwe as the "Queen of Mbira Music,"was Zimbabwe's first woman mbira recording artist. She passed away in June 2013.
She was leader and featured
Read more: Beauler Dyoko
Read more: Takunda Mafika
Read more: Tafadzwa Matiure
Hemmington Shoniwa was born on 1 January 1984 in Harare. He went to Hurungwe in the rural Zimbabwe where he did his primary education. After his primary education his family moved back to Harare where he did his secondary education at Kwaedza High School in the Hifields township
Read more: Hemmington Shoniwa
Ephat Mujuru (1950–2001), was a Zimbabwean musician, one of the 20th century's finest players of the mbira, a traditional instrument of the Shona ethnic group of Zimbabwe. Although Mujuru played five types of Zimbabwean mbira, he specialty was the mbira dzavadzimu.
Read more: Ephat Mujuru
Page 2 of 4	StartPrev1234NextEnd	Profiles Upload